Taratasim-pifandraisana DigiGlot : mahita toerana any anatin’ireo sehatra tsy mitsahatra fandefasana mozika ny rock ao Galles · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Élodie Bacherot
Voadika ny 18 Aogositra 2019 12:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Español, Italiano, 日本語, English
« Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch » dia anaran'ny vohitra iray ao Galles. Io ihany koa no toerana ao Eoropa manana anarana lava indrindra, araka ny anehoan'ny fampirantiana iray momba ny teny Galoà azy tamin'ny Fetibe Smithsonian Folklife 2009. Sary an'i Alan Kotok. Nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0.
DigiGlot dia taratasim-pifandraisana ifandrimbonana, avoaka in-droa isambolana, momba ny fandraisana sy fampivadiana ny teknolojia any amin'ireo vondrom-piarahamonin'ny fiteny ahiana ho fongana, vitsy an'isa sy teratany. Manana tanjona roa ireny vondrom-piarahamonina ireny: hampitombo ny fisiana ara-nomerikan'ny fiteniny sy hanova ny tontolon'ny aterineto amin'ny fampitomboana ny fahamaroan-teny ety anaty tambajotra.
Vakiteny roa tapitrisa no voaisa
Capture d'écran de Spotify avec le nombre de lectures (au 29 janvier 2019)
Tamin'ny faran'ny taona 2018, ilay tarika galoà Alffa no tarika voalohany namoaka hira tamin'ny fiteny galoà, « Gwenwyn », izay nahatratra iray tapitrisa no nilalaovana azy tao amin'ny sehatra Spotify. Vao mainka tena niavaka io fahombiazana io satria tsy fantatra loatra any ivelan'ny Pays de Galles ilay tarika. Saingy noho ny Spotify izay mahatratra lavitra, ireo mpihaino any lavitra be any toa an'i Brezila sy Meksika dia nahita hira natao taminà teny iray tenenina olona maherin'ny 700.000. Rhiannon Lucy Cosslett, mpikira iray ao amin'ny gazety The Guardian, izay Galoà rahateo koa, dia niezaka nitady izay antony nahatonga hira galoà iray halaza be. Nitafa tamin'ilay mpanapariaka mozika, Alun Llwyd avy amin'ny PYST izy, izay nino ny fisokafan'ny Spotify amin'ireo mozika amin'ny fiteny rehetra. Ity farany no manazava hoe « Ny tena manja dia i Spotify mitsara ireo hira, tsy noho ny fiteny na ny tarika, fa ny lanjany amin'ny maha-mozika azy ». « Tsy nisy olona ivelan'ny faritra kely tamin'ny Pays des Galles ka hoe nahafantatra ny fisian'ny Allfa. Maneho ny tanjaky ny hira io » Hatramin'ny nivoahan'io lahatsoratra manantantara io, nahatratra 2 tapitrisa ny fihainoana azon'ilay hira galoà.
Podcast iray amin'ny fiteny Cree mizara ny tantaran'ireo zokiolona Cree any avaratr'i Quebec
Nick Wapachee, mpianatra ho mpanao gazety avy any Nemaska, Québec, dia nandefa podcast iray vaovao amin'ny fiteny cree izay mikendry ny hanampiana ireo tanora mba hampivoatra ny fahaizan-dry zareo ny fiteny Cree. Satria tsikariny ny fironan'ireo tanora cree hiteny misimisy kokoa ny teny anglisy, dia niriany araka izany ny hanampy amin'ny fanomezana votoaty nomerika maromaro kokoa amin'ny fiteny cree, ka izany no antony nanombohany podcast iray fizaràna ireo tantaran'ny zokiolona Cree. Ilay podcast In Eeyou Istchee « dia mampiroborobo ny fahamaroana, ny fifanajàna, ary ny fahalalahana maneho hevitra » ary mandray anjara amin'ny fitondrana ilay fiteny Cree ho any amin'ireo mpamaky sy mpianatra, na aiza na aiza misy azy ireny. Afaka raisina ao amin'ny iTunes sy Soundcloud ilay podcast.
Fikambanana maliàna iraisan'ireo mpandala ny teny, nandefa fanangonantsonia tany amin'ny Feon'i Amerika (VOA) mba hampiasàny ny fitsipi-panoratana bambarà ofisialy.
Tamin'ny 2013, ilay fampielezampeo iraisampirenena Feon'i Amerika (Voice of America, VOA) no nanomboka ny fandaharany tamin'ny fiteny bambarà, iray amin'ireo fiteny ofisialy ao Mali, teneninà olona maherin'ny 15 tapitrisa. Ny VOA dia manana ihany koa tranonkala iray amin'ny fiteny Bambarà izay vao haingana no nahasarika ny saina tamin'ny fampiasàny ny dika « nomena loko frantsay kokoa » amin'io fiteny madingue io, fa tsy ny fitsipi-panoratana ofisialy novolavolaina sy namporisihan'ny fitondrana Maliàna, ary ireo andry rehetra mpiaramiasa, toy ny Akademia Afrikàna momba ny Fiteny.
Dr. Coleman Donaldson, mpahay manokana momba ny fiteny, mpikaroka sady mpampianatra ny fiteny mandingue, dia nahatsikaritra ny fampiasàn'ny VOA ny fitsipi-panoratana miloko frantsay bebe kokoa. Don Osborn, mpanoratra ny boky momba ireo teny afrikàna ao anatin'ny vanimpotoana nomerika, dia nanontany tena raha toa afaka manazava io toedraharaha tsy ahafahana manaraka ny fitsipi-panoratana bambarà io ny fahavitsian'ny voanteny eo amin'ny fitendry. Raha ny marina dia azo fintinina amin'ny hoe ny VOA dia nametraka fa ampahany kely monja amin'ireo mpihaino an-dry zareo no afaka mamaky ny fitsipi-panoratana bambarà. Na izany aza, nanasongadina ihany koa i Osborn fa mety ho fiheverana tsy voamarina izany. Noho izany, ny Faribolan'ny teny Bamakoà dia nanomboka fanangonantsonia iray nitakiana ny VOA mba handray ny fitsipi-panoratana ofisialy. Abaribarin'io fanangonantsonia io ireo ezaka sy fitaovana nandray anjara tamin'ny fampivoarana ilay fitsipi-panoratana. Araka izany, ireo fampielezampeo iraisampirenena, toy ny Radio France Internationale, dia nanao ezaka mba hampiasa ny fitsipi-panoratana ofisialy eny anatin'ny tranonkalan-dry zareo-.
Fampiharana iray ho an'ny teny, entina mampianatra ny ankizy ireo teny zanatany ao Kanadà
Ny KOBE Learn dia fampiharana iray narafitra mba hanampiana ireo tanora mpampiasa azy hianatra fehezanteny sy teny fampiasa matetika amin'ny fiteny Ojibway, Cree ary Oji-Cree, tenindrazan'ireo vondrom-piarahamonin'ireo Firenena Voalohany any avaratra andrefan'i Ontario, ao Kanadà. Fiarahana miasa teo amin'ny filankevitra momba ny fanabezana ao an-toerana sy mpampianatra fiteny ary ireo tranainy sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina no nahafahana namorona ilay fampiharana. Nitady fitaovana iray maoderina ho entina mampianatra ilay filankevitra, fitaovana afaka hanampy hanohana ireo fiteny zanatany amin'ny hoavy.
« Betsaka ireo antipanahy eto amintsika no maty, isanandro, ary tena manandanja be tokoa ny hitahirizana ny zavatra ananantsika ankehitriny, » hoy i Sarah Johnson, tomponandraikitra iray avy amin'ny kaomity momba ny tenindreny. « Maro be amin'ireo zanatsika miditra an-tsekoly no tsy miteny ny tenindrenin-dry zareo. Fomba iray tsotsotra izany izy ity hitahirizana, hikajiana ny fiteny. »
Misy fampiharana ho amin'izany ve (amin'ny fiteny galoà) ?
Ho an'ny maro amintsika, ny telefaona finday dia lasa fanitarana ny tenantsika mihitsy – tsy maintsy eo hatrany, ary manelanelana ny betsaka amin'ny fifandraisantsika amin'ny tontolo manodidina. Ireo mpiteny ny teny iraisampirenena be mpampiasa dia zatra mahazo fampiharana sy lalao azon-dry raisina amin'ny fiteniny, fa ireo mpiteny ny fiteny vitsy an'isa kosa, toy ny cymraeg (galoà) dia zara raha misitraka zavatsoa tahaka izany. Tao anaty fandalinana iray vaovao, Daniel Cunliffe, profesora iray ao amin'ny anjerimanontolon'ny Pays des Galles Atsimo, dia mandinika ireo fampiharana galoà miisa 400 mahery misy ao amin'nhy App Store an'ny Apple. Io fikarohana io dia miezaka ny hamantatra ny fampiharana tsirairay momba ny fiteny sy hahatakatra tsaratsara kokoa ny zavatra manosika azy ireny ary ny vinavinan'ireo namorona azy. Tsikaritr'i Cunliffe fa ireo mpanorona fampiharana ho an'ny fiteny galoà dia miatrika fanamby marolafy hahafahany manakaiky ireo mpampiasa azy, indrindra fa raha resaka fahafahana mahazo ilay fampiharana novokarin-dry zareo. Nofintinin'ìlay fandalinana tamin'ireo torohevitra ho an'ireo mpamorona, ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana (ONG) mpampiroborobo ny fiteny, ary ireo hafa ihany koa. Hahaliana ny vondrom-piarahamonnia rehetra momba ny fiteny izy ity, dia ireo izay mikatsaka ny hanetsika ny mpampiasa azy amin'ny alàlan'ireo fitaovana finday eny aminy.
Hetsika & zavatra hoavy (rohy amin'ny teny anglisy)
Ny Endangered Languages Program, fandaharanasa iarahan'ny Language Documentation Training Center (LDTC) hanomezana ety anaty tambajotra konferansa isankerinandro maimaimpoana momba ny antontan-kevitra ho an'ny fiteny — Febroary sy Martsa 2019.
Fisokafan'ny fanohanana ara-bola ny lova ara-teny avy amin'ny Tahirimbolan'ny Teny Tandindonin-doza 2019. Fanohanana ahazoana hatramin'ny $4,000 USD (manodidina ny $2,000 USD eo ny salanisa) mba hanohanana ny fametrahana antontan-kevitra momba ny fiteny sy ireo ezaka fanomezana aina vao manerana izao tontolo izao. Tsy mila fahaizana akademika ambony be no ananan'ireo mpandray anjara. Nifarana tamin'ny 15 Martsa ny fisoratana
Ny PULiiMA 2019 – Kaonferansa momba ireo Teny Zanatany & Teknolojia, nalahatra ho atao any Darwin, Aostralia ny 19-22 Aogositra 2019 dia efa nanokatra ny fiantsoany ireo mpandray anjara. Fisoratana nifarana tamin'ny 9 Febroary 2019.
Misorata anarana handray ny taratasim-pifandraisan'ny DigiGlot
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Anna Belew, Derek Lackaff, Kevin Scannell, Claudia Soria, sy Eddie Avila, niaraka tamin'ny fanohanana teo amin'ny famohanana nataon'i Georgia Popplewell.